Dagaal kharaar oo ka dhacay Buurhakaba | KEYDMEDIA ONLINE
Dagaal kharaar oo ka dhacay Buurhakaba
Sarkaal katirsan ciidamada ayaa sheegay inay jab xooggan gaarsiiyeen ururka Al-Shabaab, kuna raadjoogaan habqankooda.
BUURHAABA, Soomaaliya - Dagaal la isku adeegsaday hubka nuucyadiisa kala duwan una dhaxeeyay Al-shabaab iyo ciidamada maamulka Koofur-galbeed ayaa ka dhacay magaalada Buurhakaba oo 60 km u jirta magaalada madaxda ku-meelgaarka ah ee Beydhabo.
Sida ay sheegayaan dadka degaanka, dagaalka ayaa ku bilowday weerar ay Al-Shabaab kusoo ekeeyeen sal-dhig ay ciidanku ku lahaayeen magaalada oo la yiraadho Xerada Shiinaham, waxaana dhex maray dirir saacado socotay. Dadka degaanka ayaa sidoo kale intaas ku daray inay maqlayeen hugunka iyo daryanka hubka culus oo ay dhinacyadu isku ridayeen.
Lama oga qasaaraha rasmiga ah ee laba dhinac kala gaaray. Waxaase la sheegayaa in ciidamadu ay bilaabeen dabagal iyo baaritaan in yar kaddib markii al-Shabaab ay dib u gurasho ka sameeyeen goobtii ay dagaalka kusoo qaadeen.
Kooxda Al-Shabaab ayaa dhawaanahan xoojinaysa weerrarada ay ku qaadayso xarumaha ciidamada, mana jiro howlgal ka dhan ah kooxda xiriirka la leh Al-qaacida, oo ka socda Bay iyo Bakool.